Hosting | Saturngod
9 Replies Web Hosting လို့ဆိုရင် - Share Hosting
- Grid Server
ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တာကတော့ Share Hosting ပါ။
Share Hosting က အခြား hosting တွေထက် စျေးပိုသက်သာပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း Ulimited Space , Ulimited Bandwidth စတာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တန်းတော့ Ulimited Space , Ulimited Bandwidth လို့ ရေးထားပေမယ့် ကိုယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်က အကန့်အသတ်နဲ့ပါ။ ပုံမှန် php , html website လေး run လို့ရတယ် ဆိုရုံလောက်ပါပဲ။ ကိုယ့် website က MySQL မသုံးထားဘူး။ Mongodb သုံးထားတယ်။ Share hosting က support မလုပ်ထားရင် သုံးမရဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး ကိုယ့် website မှာ curl သုံးထားတယ်။ သို့ပေမယ့် share hosting ရဲ့ php က curl library ကို enable မလုပ်ပေးထားရင် သုံးမရပြန်ဘူး။ Python သို့မဟုတ် ruby on rail စမ်းချင်တယ်။ ဒါလည်း မရပြန်ဘူး။ SSH တော့ access ရတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘာမှ သွင်းမရဘူး။ တနည်းပြောရင် website လေး run တယ်ဆိုရုံလောက်ပဲရပါတယ်။ CPU usages က 1% ထက် ကျော်သွားရင် down သွားတတ်တယ်။ CPU usages 1% ကျော်ရတာက image upload ကြီးတာ ဒါမှမဟုတ် image ကို resize လုပ်တာ ဒါ့အပြင် chat script run ထားတာတွေက အသာလေး ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ Share Hosting အများစုကတော့ CPanel ကို ပေးထားပြီး ၁ လ ကို US $3ဝန်းကျင်သာ ရှိပါတယ်။ Share Hosting ဆိုတာကတော့ computer တစ်ခုတည်းကို user တွေ အများကြီး ဝိုင်းသုံးတာမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့် အများကြီး ပြုပြင်ခွင့် မပေးထားဘူးပေါ့။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး သုံးခဲ့တဲ့ Share Hosting Awardspace ဖြစ်ပြီး သုံးရတာ အဆင်မပြေလှဘူး။ ပုံမှန် curl script လေး သုံးတာတောင် CPU 1% ကျော်လို့ ပိတ်ခံထိတာနဲ့ hostmonster ပြောင်းခဲ့တယ်။ hostmonster မှာ ebooks တွေ တင်လို့ ဆိုပြီး ပိတ်ခံခဲ့တာနဲ့ bluehost ကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ bluehost မှာက အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် CPU က 1% ကျော်တာ ခဏ ခဏ ဖြစ်တာနဲ့ share hosting တွေ မသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့် share hosting တွေက CPanel ပေးထားပြီး domain ထည့်တာတွေ file manager တွေ FTP account ဖန်တီးတာတွေ အားလုံးကို လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
Share Hosting ကနေ ပြောင်းပြီးသုံးဖြစ်တာက​ောတ့ mediatemple grid server ပါ။ CPU usages တွေ bandwidth တွေ ဘယ်လောက် ကျော်ကျော် site down သွားတာ မရှိဘူး။ သုံးသလောက် ပိုပေးရတယ်။ Media Template Grid Server က ပုံမှန် website အတွက် တော်တော် လေး ကို ကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် full root access မရပါဘူး။ managment hosting ဖြစ်ပြီး သုံးရတာလွယ်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာကို သူတို့ကို ပြောလိုက်ရင် သွင်းပေးတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်ခွင့် မရှိသလို စျေးလည်း များလှပါတယ်။ Media Temple က ၁လ ကို US $ 30 ပေးရပါတယ်။
Media Temple ကနေ rackspace ကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ Rackspace မှာ Ubuntu Server တင်လိုက်တာ မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် nginx ထည့် ။ PHP သွင်း ။ MySQL သွင်း စတာတွေ လုပ်တာကတော့ အချိန် တော်တော်ပေးရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးရင် nginx , apache စတာတွေမှာ domain တစ်ခု ထည့်ရတာ တော်တော် ရှု့်တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ domain တစ်ခု လောက် ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ ထမင်းစား ရေသောက်ဖြစ်သွားပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် shell script လေး ရေးပြီး domain တစ်ခု ထည့်တာ လွယ်လွယ် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ rasckspace cloud hosting က မိမိ စိတ်ကြိုက် hosting ကို ပြောင်းလို့ရတယ်။ သူတို့ သုံးတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပြောရရင်တော့ elastic ဖြစ်တယ်ပေါ့။ size သေးသေးကနေ ကြီးကြီးလွယ်လွယ် ပြောင်းလို့ရတယ်။ မလိုတော့ရင် size သေးသေးပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ Cloud server သုံးရင်း သတိထားမိတာက ကျွန်တော့် အတွက် cloud server ကြီးက လိုမှ မလိုတာ။ ပုံမှန် website လေးတွေ ဘာမှလည်း usages က မများလှဘူး။ cloud hosting က ၁ လ ကို $21 ဝန်းကျင် လောက်ကျတယ်။ သုံးတဲ့ usages ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ပေးရတာပါ။ အဓိက ပေးရတာကတော့ bandwidth out ပဲ။ file တွေ backup လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် download ချပြီး သိမ်းရင်တော့ အဲဒီလ ပိုပေးရတတ်တယ်။
Rackspace ကနေ ပုံမှန် VPS ကို ရွေးတော့ Linode ကို တွေ့တယ်။ VPS Hosting ။ သုံးရတာ လွယ်တယ်။ Dashboard panel က တော်တော် ကောင်းတယ်။ CPU usages တွေ Disk I/O တွေ အကုန် ပြပေးတယ်။ သုံးတဲ့ bandwidth တွေ လည်း ပြထားပေးတယ်။ bandwidth ပြည့်ခါနီးရင် server ပေါ်ကနေ ပြန်ပြီး download ချတာကို လျော့ ပြီး သုံးလိုက်ရုံပဲ။ reboot , shutdown စတာတွေ လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရတယ်။ Backup system လည်း ထည့်ချင်ရင် ရတယ်။ တော်တော် ကောင်းတဲ့ VPS hosting ပါ။ 512 MB ကို တစ်လ $19.95 ပေးရတယ် ။ စျေး နည်းနည်းများတာက လွဲပြီး ဘာမှ ပြောစရာ မရှိဘူး။ VPS hosting ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ OS ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တင်။ အစ အဆုံး nginx , mysql , php , nodejs, mongodb စတာတွေ အကုန် ပြန်တင်။ အဲဒါလေးတော့ ပင်ပန်းတယ်။ ၁ ရက် ၂ ရက်လောက်တော့ အချိန်ပေးရတယ်။
Linode သုံးနေတာကနေ twitter ပေါ်မှာ ဘယ်သူ tweet လိုက်လဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ stackful.io ကို သွားတွေ့တယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော် စျေးသက်သာတယ်။ Linode ထက် ထက်ဝက် ကြီးများတောင် သက်သာတယ်။ ၁ လ 10 သက်သာ ရင် ၁၂ လ ဆိုရင် 120 သက်သာသွားမယ်။ ဒါကြောင့် Linode သုံးနေတာက ၁ နှစ်ကျော်ကနေ stackful.io ကို ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ စဉ်းစားရုံပဲ ရှိသေးတယ် stackful.io က twitter ကနေ private message ပို့ပြီး ၃ လ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ပြောတယ်။ ပထမ စမ်းသုံးကြည့်တော့ အတူတူပါပဲ။ သို့ပေမယ့် stackful.io မှာ dashboard မပါသလို disk I/O စတဲ့ information တွေ မရှိသေးဘူး။ နောက်ပြီး bandwidth usages ကိုလည်း မဖော်ပြထားသေးပါဘူး။ စျေးက $9.98 ပဲ ရှိတာကြောင့် နောက်ပြီး ၃ လ သက်သာသွားတာ ကြောင့်ရယ် ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Hosting နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာ သုံးသင့်သလဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ budget ရယ် ကိုယ် သုံးဖို့လိုတဲ့ infrasturcture ရယ် ၂ ခု ပေါင်းပြီး စဉ်းစားရပါမယ်။ သာမာန် wordpress blog လေးလောက်ပဲ ဆိုရင်တော့ share hosting လောက် နဲ့ ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် app တွေ ဒါမှမဟုတ် python , ruby on rail စတာတွေ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ VPS ကို စဉ်းစားရမယ်။ သုံးတဲ့ လူတွေက များလွန်းလို့ မနိုင်တော့ဘူးထင်ရင်တော့ VPS ထက် cloud က အကောင်းဆုံးပဲ။
ဒါမှမဟုတ် torrent run ထားမယ် နောက်ပြီး VPN လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တင်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VPS က အကောင်းဆုံးပဲ။ အဲလိုမျိုး ကိစ္စတွေက bandwidth စားတဲ့အတွက် https://www.digitalocean.com/ လိုမျိုး unlimited bandwidth ရတဲ့ VPS မျိုးကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုထက်ထိတော့ Dedicated Server မသုံးဖူးသေးပါ။ Dedicated ကတော့ စက်တစ်လုံးလုံးကို ကိုယ်ပိုင် သွားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ VPS နဲ့ မတူတာက VPS က virtual machine ပါ။ တကယ့် အစစ်အမှန် memory တွေ CPU တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ Dedicated ကနေ ပြန်ပြီး share ထားတာတွေပါ။ Dedicated လောက် powerful မဖြစ်တာတာတော့ အမှန်ပါ။ Dedicated ထက်စာရင် cloud server ကို ပို သဘောကျပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged cloud, hosting, server on December 12, 2012 by saturngod. Post navigation
← Generate Keys [Snippet]
Don’t forget callback →
9 thoughts on “Hosting” Si Thu December 12, 2012 at 3:40 pm Thanks for ur knowledge sharing bro;
Reply ↓ Zeyar December 13, 2012 at 1:10 am How about Amazon AWS? I am thinking of using for my next project.
Reply ↓ saturngod Post authorDecember 13, 2012 at 9:17 am It’s awesome. I love it. I done AWS with2projects and I always happy with AWS. S3 is really nice for file storage and we can create instance easily. But the price is around US $100 per month.
Reply ↓ mgpyone December 13, 2012 at 1:38 am Unlimited bandwidth actually means “Unmetered bandwidth” which is they don’t giveabandwidth cap. You get full speed of up and down as much as the port allows. And the providers do monitor your data transfer in GB or TB.
Reply ↓ saturngod Post authorDecember 13, 2012 at 9:16 am Thanks for your information.
Reply ↓ Han Myo Htwe (@hanmyohtwe) December 15, 2012 at 2:39 pm true story
Reply ↓ akz December 21, 2012 at 8:03 pm thanksalot!
Reply ↓ Sweet Sweet February 13, 2013 at 10:51 am If you have time, please share domain pointing experience also. Thank you,
Reply ↓ saturngod Post authorFebruary 13, 2013 at 9:00 pm If I haveatime , I will.
လေးထောင့် စားပွဲတစ်ခုရဲ့ ထောင့်တစ်ခု အကြောင်းကိုပြောတဲ့ အခါမှာ အခြား ထောင့် ၃ ခုနဲ့လည်း ဆက်စပ်တယ်ဆိုတာကို မသိတဲ့ တပည့်မျိုး ငါ မလိုချင်ဘူး — ကွန်ဖြူးရှပ် Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod